Global Voices teny Malagasy » Iza No Miaro Ny Zon’ny Mpiserasera Aterineto Rosiana? Tsy Ho Ireo Lehilahy Ireo. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Janoary 2016 18:15 GMT 1	 · Mpanoratra Tanya Lokot Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Tsy misy ifandraisany amin'ny zon'ny mpiserasera ny mediatoran'ny aterineto ao Rosia sy ny mpanolotsaina momba ny aterineto an'i Putin. Sary avy amin'i Till Teenck ho an'ny Tetikasa Noun. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Efa fantatsika fa tsy manana fiantrana loatra amin'ny fahalalahan'ny aterineto ny governemanta Rosiana, miaraka amin'ny drafitra goavana  avy amin'ny sampan-draharaham-panjakan'ny sivana Rosiana Roscomnadzor sy ny andrim-panjakana hafa mba hanohy ny fifehezan'izy ireo ny RuNet. Saingy raha te hametraka fitsipika sy hametra ny fifandraisana an-tserasera ao Rosia ny tsirairay sy ny renin'izy ireo, tsy maro ny manampahefam-panjakana na manam-pahaizana saika tsy miankina momba ny aterineto no mihazakazaka manohana ny mpiserasera.
Tranga momba izany: na ny mediatoran'ny aterineto ao Rosia, Dmitry Marinichev, na i Klimenko ilay Alemana mpanolotsaina momba ny aterineto voatendry vao haingana ao amin'ny Filoha Rosiana, dia samy mihevitra fa samy tsy tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiserasera aterineto ao Rosia izy ireo. Raha tsy izany, dia manoso-kevitra manondro olon-kafa izy ireo—lazao hoe ny mpanandra-peon'ny zon'olombelona—no tokony hijoro hiambina amin'ny resaka zon'ny mpiserasera.
Tamin'ny 10 Janoary, nantsafain'ny  Echo Moskvy i Klimenko (nanaovan'ny  vohikalam-baovao Rosiana Meduza fampahafantarana ny momba azy taorian'ny fanendrena azy ho mpanolotsaina ara-aterineto an'i Vladimir Putin) izay tsy nety hisahana ny fahalalahana miteny na ny fikazamanana amin'ny aterineto.
Tsy izaho no mediatora. Aza mampanahiran-tsaina ahy amin'ny fanontaniana momba ny “[figadrana] roa taona noho ny re-tsioka natao,” tsy olako izany. Aza mankaty amiko amin'ny resaka fizakamanana, tsy ao anatin'ny andraikitro izany. Tontolo iray ihany no andraikitro, ary ara-toekarena izany.
Tany alohaloha tany i Klimenko nampiraondraona ny tambajotra sosialy taorian'ny filazana nandritra ny antsafa  tao amin'ny TV Rain fa mieritreritra izy fa ny fampitan-kafatra Telegram dia tokony “na hiasa miaraka (amin'ny governemanta rosiana) na tokony hikatona.” Tamin'ny fanombohan'ny volana Janoary 2016 i Klimenko nifampiresaka  tamin'ny BBC Rosiana ary niteny tamin'ny mpanao gazety fa tokony hahazo tombontsoa amin'ny fametrahana lambam-baravarana vy nomerika i Rosia. “Raha akatontsika ny sisintany nomerika, dia handresy ny tranonkalanay rehetra. Handresy ny Yandex. Handresy ny Mail.ru,” hoy i Klimenko, niampanga ny Google, Facebook, ary ny orinasantserasera iraisampirenena hafa “mitelina ny tsenan'ny dokambarotray.” Nolazain'i Klimenko tamin'ny BBC ny asany amin'ny maha-mpanolotsaina vaovao an'i Putin azy hifantoka amin'ny fandrindrana ny fifandraisana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny indostrian'ny aterineto, mandamina ny fandaniam-panjakana amin'ny rindrambaiko, mampiroborobo ny fandoavam-bola an-tserasera sy ny e-fanabeazana.
Ny mahavariana, nilaza ho tsy tompon'andraikitra amin'ny zon'ny Rosiana mpiserasera aterineto ihany koa ny mediatora ara-aterineto rosiana Dmitry Marinichev, izay nohamarinin'i Klimenko nandritra ny antsafa ny anarany, tamin'ny fanehoan-kevitra  tao amin'ny tranonkalan'indostria vc.ru:
Miasa amin'ny olan'ny ara-aterineto sy ny fandraharahana ara-teknolojian'ny Fifandraisana aho, ary mifototra amn'ny antson'izy ireo izany. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia olana iraisan'ny ao amin'ny indostria izany, ary iraisana ny fitarainan'ny orinasa. Matetika izy reo mifandray amin'ny fisantaran'andraikitry ny fanaovandalana vaovao.
Amin'ny olon-tsotra izany dia sady sarotra kokoa no mora kokoa. Mieritreritra aho fa ny hetsiky ny olompirenena iray dia hetsiky ny olompirenena iray. Ary tsy misy mahasamihafa azy na an-tserasera no anaovana izany na andavanandro. Raha misy ny olona eo amin'ny zon'ny olompirneena dia manana mediatoran'ny zon'olombelona sy ny fikambanana mpandala ny zon'olombelona ary ny toy izany isika.
Ireo mpanandra-peon'ny zon'olombelona, izay samy tondroin'i Klimenko sy Marinichev tamin'ny fanehoan-keviny, dia efa nampaneno ny fanairana amin'ny fitomboan'isan'ireo fepetra misahana ny resaka sy asa an-tserasera ao Rosia ary manameloka ny fihamafisan'ny sazy raha voahosihosy ireny fepetra ireny. Ny famoahana sary, soratra ary lahatsary an-tserasera, miaraka amin'ny fiampangana ho nanao tenim-pankahalana na eksitiremisma, dia efa nitarika tany amin'ny fanagadrana mpiserasera tahaka ny mpikatroka Darya Polyudova  sy ny bilaogera Vadim Tyumentsev . Manahy ireo miady hiaro ny zon'ny mpiserasera rosiana fa vao fanombohan'ny fanenjehana goavana kokoa ireny didim-pitsarana ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/12/78203/
 drafitra goavana: https://globalvoices.org/2015/12/31/what-to-expect-from-russias-state-censor-in-2016/
 ny mpikatroka Darya Polyudova: https://globalvoices.org/2015/12/21/russian-activist-gets-two-year-sentence-for-calls-to-extremism-on-social-networks/
 bilaogera Vadim Tyumentsev: https://globalvoices.org/2015/12/30/a-five-year-prison-term-for-hate-speech-for-a-russian-blogger/